नौ महिने बच्चा एउटा कोठामा रुँ’दै, अर्को कोठामा पति पत्निको यसरी गयो ज्यान – PathivaraOnline
Home > समाचार > नौ महिने बच्चा एउटा कोठामा रुँ’दै, अर्को कोठामा पति पत्निको यसरी गयो ज्यान
नौ महिने बच्चा एउटा कोठामा रुँ’दै, अर्को कोठामा पति पत्निको यसरी गयो ज्यान
admin December 23, 2020 December 23, 2020 समाचार	0
एजेन्सी । एक दम्पत्ती आफ्ना सानो बालकलाई एउटा कोठामा एक्लै छोडेर अर्को कोठामा पा’सो लगाएको अवस्थामा फेला परेका छन् । ९ महिनाको बच्चालाई एउटा कोठामा एक्लै छोडेर दम्पत्तीले देह त्याग गरेका हुन् ।
यो घटना भारतको गाजियाबादको साहिबाबादस्थित इंदिरापुरममा भएको हो । त्यहाँको ज्ञान ब्लाक १ मा बस्ने एक दम्पत्ती शुक्रबार बिहान मृ त फेला परेका थिए भने उनीहरुको ९ महिनाको बच्चा अर्को कोठामा रुँ’दै गरेको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महिलाले घटना हुनुभन्दा अघि ग्रेटर नोएडामा बस्ने आफ्नो बहिनीलाई एउटा म्यासेज पनि लेखेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ । निखिल आफ्नी पत्नी पल्लवी र ९ महिनाको बच्चासंग बस्दै आएका थिए । उनीहरुले यस्तो निर्णय किन गरे भन्ने खुलेको छैन ।
पल्लवीको वहिनीले सो म्यासेज पाएपछि गएर हेर्दा दिदी र भिनाजुलाई यस्तो अवस्थामा देखेकी थिइन् । उनले नै प्रहरीलाई खबर गरेकी हुन् । दोस्रो इण्डिरामा इंदिरापुरमको ज्ञान खण्ड १ मा बस्दै आएका थिए । निखिल नोएडाको एक निजी कम्पनीमा बिक्री विभागमा काम गर्ने गरेका थिए ।
दिदीको त्यस्तो म्यासेज पाएपछि बहिनीले सुरुमा आफ्नो साथीलाई भनेर दिदीको घरमा गएर बुझ्न लगाएकी थिइन् । आफु टाढा भएका कारण उनले साथीलाई दिदीको घरमा पठाएकी थिइन् । साथीले घटनाका बारेमा बताएपछि उनी पनि दिदीको घरमा आइन् ।
प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । पल्लवीले एक बर्ष पहिले जागिर छो’डि दिएकी थिइन् । उनी पति र छोराको रेखदेख गरेर घरमै बस्थिन् । उनका पति भने पति नोएडाको एक निजी फर्ममा काम गर्थे । प्रहरीले घटनास्थलमा कुनै नोट फेला नपरेको जनाएको छ । पल्लवीको बच्चा बहिनीले लिएर गएकी छन् ।
कोरियन ब्योईफ्रेण्डलाई भेट्न एयरपोर्ट पुगिन् गँगा, संगै आएकि आमाको आँखाबाट रोकिएनन् आँशु! (भिडियो सहित)
यी बृद्दा आमाको चीत्कार: सरकारले बासै उठाउने भयो, म क्यान्सर बोकेर कता जाऊँ?
अस्पतालमै पुगेर रबि र पत्नीले भेटे प्रधानमन्त्री ओलीलाई, भाबुक हुँदै दिए यस्तो प्रतिक्रिया (भिडियो सहित)
डा. केसीलाई क्यान्सर बिरामीको प्रश्नः बिदेश पठाएर कमिशन लिने डाक्टरविरुद्ध बोल्नुहुन्छ ?
रमिलाको हत्या गर्नुको पछाडी यस्तो कारण, योगेन्द्रले बयानमा खोले सनसनीपूर्ण रहस्य(भिडियो)
को हुन् यी १७ बर्षकि सुन्दर किशोरी? जसका लागि भ्लादिमिर पानी झै पैसा बगाउछन?
सोमबार बिहानै श्रीमति सहित पशुपति मन्दिरमा किन पुगे प्रधानमन्त्री केपी ओली?
अबको प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, यस्तो छ आन्तरिक रणनीति
भारतबाट केरा लिएर नेपालतर्फ आइरहेको ट्रकको क्याबिनमा देखियो यस्तो अचम्म! चालक नै अत्तालिएर भागेपछि…
गायिका टिका सानु किन रुदैं आईन मिडियामा ? (भिडियो सहित)
०७७ साल माघ १२ गते सोमबार, हेर्नुहाेस तपाइँहरूको राशिफल अनुसारकाे भाग्यफल यस्तो!
भर्खरै गयो यस्तो शक्तिशाली भूकम्प!